Les Pommiers (okusho izihlahla zama-apula ngesiFulentshi)
Singly, Grand Est, i-France
U-Anne uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
(okusho izihlahla zama-apula ngesiFulentshi)
Ikotishi elithokomele elakhiwe ngamatshe enhliziyweni yobuhle bendawo yesifunda sase-Ardennes
Woza ujabulele yonke ikotishi i-Les Pommiers ebekwe emagqumeni ase-Pre-Ardennes! Indlu iyindlu yomndeni ejwayelekile yase-Ardennes etholakala edolobhaneni elincane lase-Singly ku-5 kms ukusuka kuthelawayeka. Indawo ekahle yabathanda ukuqwala izintaba, abazingeli bamakhowe, abathandi bokudla newayini/ubhiya, abalandeli begalofu, ezohlinzeka ngolwazi oluhle kakhulu lwasemaphandleni lwaseFrance.
Ifanele imindeni, abangani kanye nabasebenzi, le ndlu enkulu eyakhiwe ngamatshe ingu-120m2/1292 sq ft inamagumbi okulala angu-3, imibhede engu-6, amagumbi okugezela angu-2, izindlu zangasese ezi-2, ingadi yangasese ebiyelwe enezihlahla zama-apula kanye nesihlahla esihle sama-cherry, ithala elifulelwe. i-gas griddle, inkantolo ye-pétanque, nazo zonke izinsiza ezidingekayo ukuze uhlale ukhululekile futhi ujabulise.
Isitezi esiphansi: Igumbi lokuhlala, igumbi lokudlela, ikhishi elihlome ngokuphelele, ikamelo lokulala elingu-1 elinemibhede emi-2 (indlovukazi engu-1 + iwele elingu-1 elilungisekayo), ukugeza oku-1, nendlu yangasese ehlukene engu-1, imininingwane eyengeziwe imi kanje:
Indawo ye-foyer inendlu yangasese, kanye nekhabethe. Ifakwe umpheme wokungenisa izinto, umshini wokuwasha izitsha, ihhavini, ne-microwave, ukwakheka kwekhishi kuklanywe ngendlela yokuthi ukwazi ukupheka ngenkathi wabelana ngezikhathi ezimnandi nomndeni nabangane (i-plancha, i-raclette party grill, isethi ye-fondue, i-Croque-monsieur cast toaster, njll.). Itafula lokudlela lihlala abantu abangafika kwabayi-8. Igumbi lokuhlala elithokomele lifakwe i-TV engu-105 cm/41.3”, umbhede osofa abazihlalo ezintathu, nezihlalo ezimbili zokuphumula. Isitofu sezinkuni sizoqinisekisa ukuhlala ngokunethezeka phakathi nobusuku basebusika. Ikamelo lokulala linombhede wendlovukazi ongu-160 cm/omkhulu kanye nombhede wengane onwebekayo olungele ingane encane ukuthi ilale. Kukhona igumbi elikhulu lokugqoka elifinyeleleka kuwo wonke umuntu osendlini. Indlu yokugezela inobhavu wokugeza kanye neshawa nendawo yokuwasha enomshini wokuwasha nokomisa.
Esitezi sokuqala: amagumbi okulala ama-2, indawo yokugezela engu-1, imininingwane eyengeziwe imi kanje:
Igumbi lokulala#1 libheke ingadi enombhede omkhulu wendlovukazi, umbhede wamawele, kanye newodilophu. Igumbi lokulala#2 elibheke emgwaqeni othule linombhede omkhulu wendlovukazi, umbhede owodwa, kanye nekhabethe lokungena. Igumbi lokugezela kuleso sitezi lineshawa kanti nendlu yangasese ehlukanisiwe nayo iyatholakala phezulu.
Womathathu amagumbi okulala abanzi, indawo yokulala ikhethiwe ukuze kuqinisekiswe ukunethezeka kwawo wonke umuntu. I-pack'n play yombhede iyatholakala uma icelwa imindeni.
Ithala elinophahla linikeza indawo enkulu yokudlela enosinki kanye nesiteshi sokupheka segridi yegesi, ebheke ingadi ebiyelwe engu-800 m2/8611 sq ft.
Indawo yokuzijabulisa yomdlalo wangaphandle odumile e-Europe yengezwe ezinsizeni; inkantolo ye-pétanque (p/tanque, ebizwa ngokuthi “pay-tonk”), ihlumela lakho kokubili izicathulo zamahhashi kanye ne-bocce. Bonke ubudala bangadlala ndawonye ngezikhathi ezifudumele zasentwasahlobo nakusihlwa kwasehlobo, futhi kwazi bani ... Ikwindla, ngisho nobusika kulabo abathanda kakhulu.
Indlu ingapaka izimoto ezimbili futhi kunendawo eningi nasemgwaqweni.
Le ndawo ifakwe i-wifi enefiber enesivinini esikhulu.
Après 11 ans de vie aux Antilles, nous sommes revenus il y a 7 ans au bercail. Passionnés de voyage, de musique et de découvertes, Simon et moi, ainsi que notre fille Pauline, seront heureux de vous faire connaître notre département des Ardennes.
Après 11 ans de vie aux Antilles, nous sommes revenus il y a 7 ans au bercail. Passionnés de voyage, de musique et de découvertes, Simon et moi, ainsi que notre fille Pauline, sero…
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$563.
Hlola ezinye izinketho ezise- Singly namaphethelo